अस्ट्रेलियाका चर्चका पादरी पेल यौनदुराचारमा दोषी ठहर
मेलबर्न । अस्ट्रेलियाली एक पुनरावेदन अदालतले बुधबार कार्डिनल जर्ज पेलमाथिको बालयौन दुराचारको सजायलाई पुनः सदर गरेको छ। अदालतको उक्त आदेशपछि अदालत परिसरबाहिर भेला भएका पीडित र उनीहरूका समर्थकले खुशी व्यक्त गरेका थिए। गत वर्ष डिसेम्बरमा तल्लो अदालतको सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा कार्डिनल जर्ज दोषी ठहर...
जम्मू–कश्मीरमा झडप हुँदा एकजनाको मृत्यु, हतियार र बन्दोबस्तीका सामान बरामद
एजेन्सी । भारत प्रशासित जम्मू–कश्मीरमा एक प्रहरी अधिकारी मारिएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ । बन्दुकधारीसँगको झडपको क्रममा आफ्ना एक अधिकारीको ज्यान गएको कश्मीर प्रहरीले जनाएको हो । घटनामा एक बन्दुकधारीको पनि ज्यान गएको जनाइएको छ । भारत सरकारले संविधानमा रहेको धारा ३७० खारेज गर्दै जम्मू&ndash...
सुदूरपश्चिममा भोलि सार्वजनिक बिदा
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गौरा पर्वका अवसरमा प्रदेशभरि यही भदौ ६ गते शुक्रबारका दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘गौरा पर्व’का अवसरमा आगामी शुक्रबारका दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको हो । साथै मन्त्रालयले...
विकराल बन्दै आत्महत्या, के हो कारण र न्यूनीकरण कसरी गर्ने ?
काठमाडौं । आत्महत्या विकराल समस्याका रूपमा देखापर्दै छ । यसलाई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र जैविकगरी तीन कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । बेरोजगारी, निराशापन, डिप्रेसन, एक्लोपना, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोगलगायत आत्महत्याका कारक तत्व बन्ने गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको स...
जनयुद्ध बिर्सिँदैछन् प्रचण्ड तर द्वन्द्वपीडितको घाउ झनझन चहर्‍याइरहेको छ - न्याय कसले दिने ?
काठमाडौं । केही दिनअघि तत्कालीन माओवादीका कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धमा आफूले हतियार नउठाएको र एकजना पनि नमारेको दाबी गरे । त्यसको केही दिनपछि उनी फेरि बोले र आफूलई हेग पुर्‍याइए हिरो हुने भाषण दिए । यो श्रृंखला यतिमै रोकिएन उनी फेरि अर्को दिन अर्को कार्यक्रममा बोले रोपेको एउटा थियो...
फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, ७१ हजार ३ सय रुपैयाँ कायम
काठमाडौं । सुनको मूल्य फेरि बढेको छ । गएको शुक्रबार प्रतितोला ७१ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको सुन आइतबार प्रतितोला ५ सय घटेर मंगलबारसम्म प्रतितोला ७१ हजार रुपैयाँ कायम रहेकोमा आज बुधबार पुनः तोलामा ३ सय वृद्धि भएको हो । आज सुन प्रतितोला ७१ हजार ३ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यसैगरी आइतबारदेख...
हङकङस्थित बेलायती वाणिज्य दूतावासका कर्मचारी पक्राउ
हङकङ । हङकङस्थित बेलायतको वाणिज्य दूतावासका एकजना कर्मचारी चिनियाँ सीमाबाट पक्राउ परेका छन्। हङकङ नागरिक भनिएका सिमन चेङ गत अगस्ट ८ देखि हराइरहेका थिए । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका अनुसार बेलायती वाणिज्य दूतावासका ती कर्मचारी आफ्नो व्यापारिक भ्रमणका गएका बेलादेखि नै बेपत्ता भएका थिए। आफ्नो वाणिज्य दूत...
कार्यसम्पादन लगत्तै १६ सचिवको सरुवा, को-कहाँ ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको एक महिना पनि नबित्दै सरकारले १६ सचिवहरुको सरुवा गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सचिव सरुवाको निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग गत साउन १५ गते एकवर्षे कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्रीहरुले सचिवहरुसँग आफू अनुकूलको मितिमा सम्...
रविन्द्रको निर्वाचन क्षेत्रका लागि साझा उम्मेदवार को ?
कास्की । पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि रिक्त रहेको कास्की क्षेत्र नं २ मा आगामी मङ्सिर १४ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले कास्की–२ सहित ५० पदका लागि तोकेको ५५० मतदान केन्द्र कायम गरेको जानकारी दिएसँगै कास्कीमा चुनावी सरगर्मी शुरु हुन था...
सिम्रिक एयरलाइन्सलाई उडानमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिम्रिक एयरलाइन्सको उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। नागरिक उड्डयनको नियमक प्राधिकरणले एयरलाइन्सका सबै जहाज ग्राउन्डेड गरिदिएको हो। एयरलाइन्सले प्राधिकरणले स्वीकृत नगरेका पाटपुर्जा जहाजमा प्रयोग गरेको भन्दै सबै जहाज ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गरेको हो। बि...
दाङमा बस दुर्घटना, तीनजना घाइते
काठमाडौं । काठमाडौंबाट रुकुमका लागि छुटेको बा ४ ख १०३२ नम्बरको बस दाङमा दुर्घटना भएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लमही-भालुवाङ सडकखण्डको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ५ सिसहनियामा दुर्घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय भालुबाङ्गले जानकारी दिएको छ । दुर्घटनामा तीनजना घाइते भएका छन् । उनी...